ဒီ ပုံပြင်လေး ဖတ် မိ ရင် ဖာသိဖာသာ မနေပါ နဲ့ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး လက်ဆင့် ကမ်းပေးကြပါ – Shwewiki.com
ဒီ ပုံပြင်လေး ဖတ် မိ ရင် ဖာသိဖာသာ မနေပါ နဲ့ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး လက်ဆင့် ကမ်းပေးကြပါ
တစ် ခါတုန်းက အမျိုးသားတစ်ဦး ရှိသတဲ့။ သူဟာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ မရခဲ့ပါ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မိဘတွေဟာ သူ့အတွက် မိန်းမတစ်ယောက် ရှာပြီးပေးစားလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူဟာ မိဘတွေ ပေးစားတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ လက်ထပ်ပြီးနောက် ထိုရွာလေးမှာပဲ ကျောင်းဆရာ အဖြစ် စာသင်ပြပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ စာသင်ကြားရာမှာ အတွေ့အကြုံ မရှိသောကြောင့် တစ်ပတ်တောင် မခံပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သဘောထား မှတ်ချက်တွေကြောင့် ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သူဟာ အိမ်ကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက် အိမ်သူသက်ထားက သူ့ကို မျက်ရည် သုတ်ပေးပြီး နှစ်သိမ့်စကား ပြောပေးပါတယ်။
“အတွေ့အကြုံ ဝမ်းစာမပြည့်သေးတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ချို့ လူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အရည်အသွေးကို ထုတ်ပြနိုင်တာလည်း ရှိသလို မထုတ်ပြနိုင်တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်နဲ့တော့ ၀မ်းနည်းဖို့ မလိုပါဘူး။ ရှင်နဲ့ ပိုသင့်တော်မယ့် အလုပ်တွေက ရှင်လုပ်ဆောင်ဖို့ စောင့်ရင်စောင့်နေမှာပါ။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ သူဟာ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်တစ်ခုမှာ ဝင်လုပ်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူဌေးရဲ့ အလုပ်ထုတ်တာ ခံလိုက်ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အလုပ်လုပ်တာ နှေးလို့ပါတဲ့။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါမှာ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ဇနီးက အားပေးစကား ပြောပြန်တယ်။
“ခြေလက်ဆိုတာ နှေးတာလဲ ရှိသလို မြန်တာလဲ ရှိတာပဲလေ။ တခြားလူတွေက လုပ်လာတာ နှစ်တွေ အများကြီး ကြာခဲ့ပြီလေ။ ရှင့်ကျတော့ တသက်လုံး စာဖတ်လာတော့ ဒီလို အလုပ်မျိူး လုပ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုလုပ် မြန်လိမ့်မလဲ”
ဒါပေမယ့်လည်း သူစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ အိမ်ပြန်လာတဲ့ အခါတိုင်းသူ့ဇနီးက အမြဲနှစ်သိမ်လေ့ရှိပြီး သူ့အပေါ်မှာလည်း တစ်ခါမှ မညည်းညူ ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ သူရဲ့အသက် ၃၀ ကျော်တဲ့အခါမှာ，သူဟာ ဘာသာစကား သင်ကြားရေးမှာ ပါရမီ အထုံရှိသူ ဖြစ်တဲ့အတွက် မသန်စွမ်းသူတွေအတွက် ဖွင့်ထားတဲ့ သင်တန်းကျောင်းမှာ နည်းပြအလုပ် ၀င်လုပ်ပါတယ်။ နောက်တော့ သူဟာ မသန်စွမ်းသူများ သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုကို ထူထောင်လိုက်ပါတယ်။
“မိမိကိုယ်တိုင်တောင် ရှေ့ ရေး မရေရာေ၀၀ါးတဲ့ အချိန်အခါမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းကများ သူ့အပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားချက် ရှိစေ ခဲ့ပါသလဲ….?”
သူ့ ချစ်ဇနီး ပြန်ဖြေတဲ့ အဖြေမှာ ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူလှပါတယ်။ သူမပြန်ဖြေလိုက်တာကတော့ “မြေတစ်ကွက်ဟာ ဂျုံစိုက်လို့ မသင့်တော်ရင် ပဲစမ်းစိုက်ကြည့်လို့ ရတာပေါ့ ပဲထွက်မကောင်းရင် သစ်သီးပင်စားပင် စိုက်လဲရတာပဲ။
အကယ်လို့ သစ်သီးပင်စားပင် မဖြစ်ထွန်းလဲ ပန်းမျိုးစေ့တွေ နဲနဲကြဲကြည့်ပြီး ပန်းပွင့်အောင် စိုက်နိုင်တာပဲ။ အကြောင်းကတော့ မြေတစ်ကွက်မှာ သူနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် မျိုးစေ့ တစ်စေ့စေ့ကတော့ ရှိလာမှာပါ ။နောက်ဆုံးမှာ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရိတ်သိမ်းမှုကတော့ ရှိလာမှာပေါ့။”
အိမ်သူသက်ထားရဲ့ စကားလဲကြားရော ယောကျာ်းဖြစ်သူဟာ မျက်ရည်ကျလာပါတယ်။ တကယ်တော့ သူ့ဇနီးသည်ရဲ့ ဇွဲကောင်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်တဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့သည် မာကျောကြံ့ခိုင်သည့် စစ်မှန်သော မျိုးစေ့ပင် ဖြစ်နေလေသည်။ သူ၏ ဆန်းကြယ်မှုတို့သည် ထိုမျိုးစေ့လေးကို မှီခိုပြီးမှ ရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့သော ဆန်းကြယ်မှုတို့ပင် ဖြစ်သည်။
လောကမှာ သုံးစား၍ မရသောသူဟူ၍ မရှိပါ။ လူမှန် နေရာမှန် နေရာချထားမှု မမှန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဒီပုံပြင်လေး ဖတ်မိရင် ဖာသိဖာသာ မနေပါနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ။
(၁)။ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိလျှင်၊ သင့်ကို ရွှေတောင်ကြီး ပုံအပ်လဲ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည် မဟုတ်။
(၂)။ ခွင့်လွတ်ရကောင်းမှန်း မသိလျှင်၊ မိတ်ဆွေ ဘယ်လောက်ပဲ များပါစေ ထွက်ခွာသွားကြမည်သာ။
(၃)။ ကျေးဇူးမှန်း မသိတက်လျှင်၊ မိုးပျံအောင် တော်နေပါစေ အောင်မြင်လိမ့်မည် မဟုတ်။
(၄)။ နှိုးကြားထကြွမှု မရှိလျှင် ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကောင်းစေအုံးတော့ အိပ်မက်ကိုပင် အကောင်ထည် ဖော်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
(၅)။ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမှန်း မသိလျှင်၊ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားစေဦး အောင်မြင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။
(၆)။ စုဆောင်းရကောင်းမှန်း မသိလျှင် ငွေပိုရှာနိုင်စေဦးတော့ ကြွယ်ဝသူဖြစ်ခဲသည်။
(၇)။ ဘ၀ရောင့်ရဲမှု မရှိလျှင် ၊ပိုချမ်းသာစေဦးတော့ ဘ၀မှာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်သူဖြစ်ခဲသည်။
(၈)။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရကောင်းမှန်း မသိလျှင်၊ ကုသမှုစရိတ် တတ်နိုင်စေဦးတော့ အသက်ရှည် အနာမဲ့ခြင်း မဖြစ်နိုင်။
ဒီပုံပြငျလေး ဖတ်မိရငျ ဖာသိဖာသာ မနေပါနဲ့ တဈဦးနဲ့ တဈဦး လက်ဆငျ့ကမျးပေးကွပါ
တစ်ခါတုနျးက အမိုးသားတဈဦး ရှိသတဲ့။ သူဟာ တက်ကသိုလ်ဘွဲ့ မရခဲ့ပါ။ အရွယျရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မိဘတွေဟာ သူ့အတွကျ မိနျးမတဈယောကျ ရှာပွီးပေးစားလိုက်ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူဟာ မိဘတွေ ပေးစားတဲ့ မိနျးကလေးနဲ့ လက်ထပျပွီးနောကျ ထိုရွာလေးမှာပဲ ကျောငျးဆရာ အဖြဈ စာသငျပြပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ စာသငျကွားရာမှာ အတွေ့အကွုံ မရှိသောကွောငျ့ တစ်ပတျတောငျ မခံပါဘူး။ ကျောငျးသားတွရေဲ့ သဘောထား မှတ်ချကျတွေကွောငျ့ ထုတ်ပယျခြငျး ခံရပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ သူဟာ အိမ်ကို ဝမျးနညျးစွာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယျ။ အိမျပြနျရောကျပြီးနောကျ အိမျသူသက်ထားက သူ့ကို မျကျရညျ သုတျပေးပွီး နှဈသိမျ့စကား ပြောပေးပါတယျ။
“အတွေ့အကွုံ ဝမျးစာမပြညျ့သေးတဲ့ အခိန်မှာ တစ်ခို့ လူတွကေတော့ သူတို့ရဲ့ အရညျအသွေးကို ထုတျပြနိုင်တာလညျး ရှိသလို မထုတျပြနိုင်တာလညျး ရှိတတ်ပါတယျ။ ဒီ့အတွက်နဲ့တော့ ဝမျးနညျးဖို့ မလိုပါဘူး။ ရှင်နဲ့ ပိုသငျ့တ်မောယျ့ အလုပျတွကေ ရှင်လုပျဆောင်ဖို့ စောငျ့ရငျစောငျ့နမှောပါ။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယျ။
နောကျတော့ သူဟာ အပြင်ထွကျပွီး အလုပ်တစ်ခုမှာ ဝင်လုပ်ပါတယျ။ သိပ်မကွာခင်မှာပဲ သူဌေးရဲ့ အလုပ်ထုတ်တာ ခံလိုကျရပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ အလုပ်လုပ်တာ နှေးလို့ပါတဲ့။ အိမျပြနျရောက်တဲ့ အခါမှာ ထုံးစံအတိုငျး သူ့ဇနီးက အားပေးစကား ပြောပြန်တယျ။
“ခြေလက်ဆိုတာ နှေးတာလဲ ရှိသလို မြန်တာလဲ ရှိတာပဲလေ။ တခြားလူတွကေ လုပ်လာတာ နှဈတွေ အများကွီး ကွာခဲ့ပွီလေ။ ရှငျ့ကျတော့ တသက်လုံး စာဖတ်လာတော့ ဒီလို အလုပ်မျိူး လုပ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုလုပျ မြန်လိမျ့မလဲ”
ဒါပမေယျ့ သူဟာ ဇွဲမလျော့ပဲ အလုပျတွေ အများကွီး ထပ်လုပ်ခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့လို့ သူလုပျသမျှ အလုပ်တိုငျးဟာ အကွောငျးတစ်ခု မဟုတျ တစ်ခုကွောငျ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရပွီး ထုတ်ပယျခြငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး သူစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ အိမျပြန်လာတဲ့ အခါတိုငျးသူ့ဇနီးက အမွဲနှဈသိမျလရှေိ့ပွီး သူ့အပျေါမှာလညျး တစ်ခါမှ မညညျးညူ ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ သူရဲ့အသကျ ၃၀ ကေ်ျတဲာ့အခါမှာ，သူဟာ ဘာသာစကား သငျကွားရေးမှာ ပါရမီ အထုံရှိသူ ဖြစ်တဲ့အတွကျ မသန်စွမျးသူတွအေတွကျ ဖွငျ့ထားတဲ့ သင်တနျးကျောငျးမှာ နညျးပြအလုပျ ဝင်လုပ်ပါတယျ။ နောကျတော့ သူဟာ မသန်စွမျးသူများ သင်တနျးကျောငျး တစ်ခုကို ထူထောင်လိုက်ပါတယျ။
နောက်ပိုငျးမှာတော့ သူဟာ မွို့အများအပြားမှာ မသန်စွမျးသူသုံး ပစ်စညျးအရောငျးဆိုင်ခွဲများ ဖွငျ့လှစ်ခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ တဖြညျးဖြညျးနဲ့ ချမျးသွာကွယျဝတဲ့ သူဌေးတဈဦး ဖြစ်လာပါတယျ။
တဈနမှေ့ာတော့ “အောငျမြငျသူတို့ရဲ့ စကားသံများ” အစီအစဉ်ကနေ စီစဉ်တင်ဆကျသူက သူ့ဇနီး ကိုမေးပါတယျ။
“မိမိကိုယ်တိုငျတောငျ ရှရေ့ေး မရေရာ ဝေဝါးတဲ့ အခိနျအခါမှာ ဘယ်လိုအကွောငျးကများ သူ့အပျေါ ယုံကွည်ကိုးစားချကျ ရှိစေ ခဲ့ပါသလဲ….?”
သူ့ ချစ်ဇနီး ပြနျဖြေတဲ့ အဖြေမှာ ရိုးရှငျးပွီး လွယ်ကူလှပါတယျ။ သူမပြနျဖြေလိုက်တာကတော့ “မြေတစ်ကွကျဟာ ဂျုံစိုက်လို့ မသငျ့တျောရငျ ပဲစမျးစိုကျကွညျ့လို့ ရတာပေါ့ ပဲထွက်မကောငျးရငျ သဈသီးပင်စားပငျ စိုက်လဲရတာပဲ။
အကယ်လို့ သဈသီးပင်စားပငျ မဖြစ်ထွနျးလဲ ပနျးမိုးစတွေ့ေ နဲနဲကွဲကွညျ့ပွီး ပနျးပွငျ့အောငျ စိုက်နိုင်တာပဲ။ အကွောငျးကတော့ မြေတစ်ကွက်မှာ သူနဲ့ ကိုကျညီမယျ့ မိုးစေ့ တဈစစေ့ကေ့တော့ ရှိလာမှာပါ ။နောက်ဆုံးမှာ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရိတျသိမျးမှုကတော့ ရှိလာမှာပေါ့။”
အိမျသူသက်ထားရဲ့ စကားလဲကွားရော ယောကျားဖြဈသူဟာ မျကျရည်ကျလာပါတယျ။ တကယျတော့ သူ့ဇနီးသညျရဲ့ ဇွဲကောငျးပွီး စဉ်ဆက်မပြတ်တဲ့ ယုံကွည်ကိုးစားမှုနှငျ့ ချဈခြငျးမတ်ေတာတို့သညျ မာကျောကွံ့ခိုငျသညျ့ စစ်မှနျသော မိုးစပေ့ငျ ဖြဈနေလေသညျ။ သူ၏ ဆနျးကွယ်မှုတို့သညျ ထိုမိုးစလေ့ေးကို မှီခိုပွီးမှ ရှငျသနျကွီးထွားခဲ့သော ဆနျးကွယ်မှုတို့ပငျ ဖြဈသညျ။
လောကမှာ သုံးစား၍ မရသောသူဟူ၍ မရှိပါ။ လူမှနျ နရောမှနျ နရောချထားမှု မမှနျခြငျးသာ ဖြဈပလေိမျ့မညျ။ဒီပုံပြငျလေး ဖတ်မိရငျ ဖာသိဖာသာ မနေပါနဲ့ တဈဦးနဲ့ တဈဦး လက်ဆငျ့ကမျးပေးကွပါ။
ဒီစကား ၈ ခွနျးကိုလဲ မှတျသားထားကွပါ။
(၁)။ တန်ဖိုးထားရကောငျးမှနျး မသိလျှငျ၊ သငျ့ကို ရှေတောငျကွီး ပုံအပ်လဲ ပျောရှင်လိမျ့မညျ မဟုတျ။
(၂)။ ခွငျ့လွတျရကောငျးမှနျး မသိလျှငျ၊ မိတျဆွေ ဘယျလောက်ပဲ များပါစေ ထွက်ခွာသွားကွမညျသာ။
(၃)။ ကျေးဇူးမှနျး မသိတက်လျှငျ၊ မိုးပျံအောငျ တျောနပေါစေ အောငျမြင်လိမျ့မညျ မဟုတျ။
(၄)။ နှိုးကွားထွကွမှု မရှိလျှငျ ဖြတ်ထိုးဉာဏျ ကောငျးစအေုံးတော့ အိပ်မက်ကိုပငျ အကောင်ထညျ ဖ်နေိာုင်လိမျ့မညျ မဟုတ်ပါ။
(၅)။ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျရမှနျး မသိလျှငျ၊ အစွမျးကုနျ ကွိုးစားစဦေး အောငျမြငျရနျ ခဲယဉျးသညျ။
(၆)။ စုဆောငျးရကောငျးမှနျး မသိလျှငျ ငွပေိုရှာနိုငျစဦေးတေွာ့ကွယျဝသူဖြစ်ခဲသညျ။
(၇)။ ဘဝရောငျ့ရဲမှု မရှိလျှငျ ၊ပိုချမျးသာစဦေးတော့ ဘဝမှာ ကျေနပျပျောရှငျသူဖြစ်ခဲသညျ။
(၈)။ ကျနျးမာရေးကို ဂရုစိုကျရကောငျးမှနျး မသိလျှငျ၊ ကုသမှုစရိတျ တတ်နိုငျစဦေးတော့ အသကျရှညျ အနာမဲ့ခြငျး မဖြစ်နိုငျ။
Credit to SwamHtet(မှတ်စုကွမျး)
သ တိထားကြ ပါနော် ငွေဆောင်ကမ်းခြေ မှာရေမကူးခင်မြင်လိုက် ရ လို့ တော်သေး တာ
ညတိုင်း ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေ ပဲ စား လို့ အလွန် ဆုံး ၁ နှစ် သာ အသက်ရှင်ခွင့်ရတော့ မယ့် ၁၈ နှစ်ကျောင်းသားလေး ရဲ့ အဖြစ်